Ngingakwazi yini ukwakha ama-backlink aphezulu wekhwalithi engenengozi yokulimaza izikhundla zami?
Amawebhusayithi athembekile kuphela namabhulogi anekhasi eliphakeme le-PageRank negunya lesizinda yizindawo ezilungile zokwakha ama-backlink aphezulu wekhwalithi. Eqinisweni, izinjini zokucwaninga zihlaziya lezi zixhumanisi ukuze "ziqonde" ukuthi i-website yakho ehloniphekile iyini, nokuthi ingakanani inani langempela elinikezela kubasebenzisi. Yingakho ube nephrofayili yokuxhumanisa ikhwalithi ye-website yewebhu noma ibhulogi kubaluleke kakhulu, ngaphandle uma ufuna ukuthi iboniswe endaweni ethile kakhulu kude nemiphumela yokusesha phezulu kuma-SERP e-Google - planification horaire de travail gratuit.
Yini eyenza iphrofayela ye-Organic Link
Ngesikhathi esifanayo, iphrofayli enhle ye-organic iphakamisa ukuthi uzokwakheka emuva kwe-quality backlink kuphela. Isibonelo, noma yikuphi ukukhwabanisa, okuphambene, okuphansi, okweqhinga, ukuhweba noma ukushintshanisa imisebenzi ngezixhumanisi yizona ezizondwa kakhulu yi-Google. Eqinisweni, izenzo ezinjalo zivele zihluleke ukuhambisana neMikhombandlela Ye-Webmaster Eyinhloko, evame ukwamukelwa ekuthuthukiseni iwebhu kanye nomqondo wonke we-Search Engine Optimization esikalini. Ngakho-ke, yini eyenza isakhiwo sokwakha isixhumanisi "sokusemthethweni" esingasoze sabonakala njengephulwa? Konke okudingayo nje ukwakha ama-backlink aphezulu wekhwalithi ngaphandle kokufaka isicelo kulawo macebo asekhohlisiwe noma okukhohlisayo asevele aqinisekiswe yizinjini ezinkulu zokusesha. Vele wenze izinto zenzeke ngokwemvelo.
Masihlele phansi. Iyiphi indlela engenakwenzeka kakhulu yokwakhiwa kwe-quality link? Ngikholelwa ukuthi konke okudingayo ukuzizwa uphephile nje ukuzigcina usuka "ohlangothini olumnyama". Ungalokothi uhambe kunoma yiziphi izindlela ze-Grey-Hat SEO noma ze-Black-Hat SEO, okuhloswe ukukhohlisa noma ukuphatha ngaleyo algorithm eyinkimbinkimbi esetshenziswe ngu-Google ukucacisa isikhundla ngasinye se-website kwi-SERPs. Ngaleyo ndlela, ngeke kube khona indawo okumele ilandelwe ukufaka iwebhusayithi yakho noma ibhulogi ngesigwebo se-Google.
Khuthaza ukuxhumanisa kwekhwalithi nokuqukethwe kwekhwalithi
Yenza okuqukethwe kwakho kube yindlela ewusizo yokwakha ama-backlink aphezulu kakhulu ngendlela engcono kakhulu. Mhlawumbe lokho kuzoba yindlela ekugcineni ephephile yokuklama isixhumanisi esibi ngaphandle kwenengozi yokulimaza izikhundla zakho Khumbula - ungahlala uthola okuningi okuningi kokuqukethwe kwekhasi lakho elivamile - okudingayo nje ukuqinisekisa ukuthi kuyingqayizivele, kufanelekile futhi kuhlinzeke inani langempela kuzilaleli zakho ezihlosiwe. Ngaleyo ndlela, uzokwazi ukuqhubeka ngokuthola i-backlink, ukuhola, ukubhalisa, ukwabelana, nokukhuluma. Ngesikhathi esifanayo, uzozibeka njengomholi wemboni ophethe futhi ohloniphekile, phakathi kokuthola isisindo esikhulu nakakhulu ngewebhusayithi yakho noma kubhulogi - kusukela kumbono wezivakashi zakho ezimangalisayo, kanye nezinjini zokusesha ngokwazo.
Ekugcineni, nanka amaphuzu amasha ukuze uqale ukuhamba endleleni efanele. Ngaleyo ndlela, ungakha ama-backlink aphezulu wekhwalithi yezinhloso ze-SEO futhi uzizwe uphephile kusukela ekuqaleni:
Qinisekisa ukuthi okuqukethwe kwakho akuniki nje kuphela inani eliphakeme kubantu abalungile, kodwa linikeza othile iphuzu lohambo lomsebenzisi. Sekuyisikhathi sokukhumbula izisekelo zokukhangisa okuhle kwe-digital, kwesokudla?).
Yiba nokuhlakanipha ukudala ukuqina okukhona ku-intanethi kuwebhusayithi yakho. Zibandakanye emiphakathini enentshisekelo futhi udale amaphrofayela amabhizinisi amaningana amakhulu ukuze usakaze imibhalo yakho engcono kakhulu kwi-Social Media.
Cabanga ngokuphinda uqale ingxenye yombhalo wakho ocacile. Khumbula, konke okudingayo ukuze uqalise ukwakha isixhumanisi semvelo - thola okuqukethwe kwakho kudingeke ukwabelana, ukusho, nokuthola izixhumanisi. Yenza kube khona ngendlela ecishe ibe yinkimbinkimbi-uphinde uvuselele izinto ezithile ezibandakanya futhi ezibalulekile zokuqukethwe zibe into ekhangayo nakwebheka amehlo, njenge-infographics ehlukene, amaspredishithi ahambayo, nanoma iyiphi enye indlela yokubonakala kwedatha yokusebenza. Lokho kusebenza ngempela ekwakheni isixhumanisi, ngaphandle kwendlela ephephile kakhulu.